Omunye enhle kunazo resort imizi Turkey wokungenisa izihambi - ke Fethiye. Kutholwe esinqeni ezintabeni, lapho embozwe yezimila zasendle ngesimo zikaphayini nemisedari amahlathi. Idolobhana yasungulwa esizeni esivumelwaneni wasendulo emthambekeni entabeni Telmess base Mendoza. Ngasekuqaleni Lycia Telmess kubhekwe elinye lamalokishi ngobukhulu. Kukhona nganekwane enhle ukuthi Apollo wamthanda nendodakazi iNkosi ka Finike okuthiwa Agenor. Lo mbhangqwana kwadingeka indodana, yaqanjwa ngokuthi Telmess. Mayelana esidlule ocebile esifundeni, ngezinye izikhathi ngeke ethule kakhulu, kusekhona ubufakazi le nqaba, elalingelamaFilisti Knights of Rhodes, kodwa manje khona ifomu yezincithakalo. Nokho, namuhla banikele esabekayo ngaphezu bay.
Ngokuthakazelisayo, esigodini Fethiye ukugadlwa ukuzamazama komhlaba bakuhlanekezela, njengalokhu umhlaba uzamazama eziningana ezinkulu, okuyinto esikhathini esidlule eseyiqedile yonke imiphakathi. Kodwa kabusha, abe sihle njalo ngonyaka. Kancane kancane liphenduke ukuhweba edolobheni elithile elikhulu. Ngo-2012, ngesikhathi ehlobo endaweni nesigodi kwaba khona ukuzamazama, okuyinto kwezwakala Marmaris futhi Antalya kude. Kodwa ukufa nembubhiso wayengekho. Izivakashi umsebenzi esifundeni ayivumelekile kulesi sici. sikhange ngokwengeziwe kubantu ezisebenza abahambi zasendle kanye nemvelo intombi. Igama layo yesimanje ye Fethiye yethiwa umufi umshayeli Turkish - Fethi Bey.
Fethiye - resort European. Wayethanda ikakhulukazi phakathi Danes kanye Dutch kanye nayo iBritish. Kungani kunzima ukusho. Kwanika abaseRussia amandla Fethiye incane, kodwa kuyafaneleka ukuthi izindleko izinkambo esifundeni ephakeme kunazo zonke ezinye. Lithi Fethiye uye wahlupheka zemlyatreeny eziningana, okuyinto, ngeshwa, wabhubhisa izikhumbuzo isiko lasendulo. Kodwa emithambekeni ukuthi ukwehla bay, kungenzeka ukuba akwazi ukuhlukanisa emathuneni Lycia. Laba bantu uncamela bangcwabe abafileyo babo e crypts ukuthi eyinkimbinkimbi ahlotshiswa. Ngokusho izinkolelo zazo, Yingcwaba umufi njengoba cimeza njengoba enzeka konkulunkulu, futhi umbuso wezulu. Phansi ezintabeni bangcwatshwa bantu abangabahlali kancane kahle off. amathuna abo sifana gravestones, ngaphandle imidwebo, amaphethini. Ziyakwazi zilula futhi kube lula. Fethiye kuyinto ngobulungisa uyaziqhenya castle yayo, elakhiwa emuva ekhulwini le-15. Nge unyawo lwayo ungabona umbono emangalisayo bay futhi edolobheni. On the omuzi ungabona yemidlalo yasendulo, okuyinto abephule kuze kube isikhathi samanje. Futhi kuze kube manje, ekusingathayo amakhonsathi neminye imikhosi. Umuzi loke nje lidume ngokuthunga LamaGreki Lobu-Orthodox futhi mosque lasendulo.
Ibhuloho emaphakathi the resort - it is a lokuhlushwa izitolo kanye izitolo, amathilomu kanye nemigoqo. Ngaphezu kwalokho, kukhona disco kuma-nightclub. Ikakhulukazi, "Lycia disco" club edume kunazo kuzosiza uphumule futhi elinamanzi amaningi nenala nokudansa.
Kulabo abathanda lwasolwandle, ukunikela diving nokudoba, kanye yokudlela elintantayo ngomculo bukhoma. Isikebhe uhambo zinhle ngoba avumela ukwazi asemaqaqasini the resort nge Valley wawo Butterflies noma amadolobhana Kabak Keyyu.
Naphezu kweqiniso lokuthi Turkey inomngcele by ezilwandle ezine, indawo emangalisayo kakhulu uphumule neyaziwayo Oludeniz emzaneni. Itholakala at ibanga 15 ukusuka Fethiye. Igama edolobhaneni izindlela Turkish "olwandle olufile." Izakhamuzi okuthiwa emzaneni wabo ngakho. Futhi kwakungenxa yokunithanda bay yayo emincane uzungezwe izintaba eziphakeme, kusuka kolwandle Mediterranean - isihlabathi ibha. Umoya akusho ukuphazamisa esigodini nolwandle njalo ezolile. Ngenxa yalokhu amanzi kuba cishe ecacile blue-blue tint! Edolobhaneni kuyinto Natural Park eBlue Lagoon. Elisogwini leli dolobhana wahlukaniswa ngamaqembu amagatsha amathathu: ebhishi Kidrak, SebesePathara futhi Laguna. Ngo-2006, SebesePathara ukhishwa njengoba ebhishi ubhedu emhlabeni. Umklomelo wakhishwa sephephandaba laseBrithani "Iphephandaba iSunday Times". Ibhishi Kidrak izivakashi ezivela Europe elibizwa ebhishi ipharadesi ngenxa yobumfihlo kwayo nobuhle.
Omunye izindawo izivakashi emhlabeni wonke izenzo Babadeg entabeni, ephethe ukuphakama 1865 amamitha. Roza vetrov nezici kwendawo lendawo wakwenza ngumgogodla ezikhungweni zomsebenzi zonke izihambeli ezifika endaweni Turkey. Sekukonke kunezinhlobo ezintathu ezintabeni ngokwahlukana iphuzu emelelwa aphakeme futhi uphawu ephansi. Phakathi kuyinto umaka Lesisemkhatsini. Njalo ngonyaka ngo-Okthoba kukhona umkhosi emoyeni imidlalo. Futhi ungakwazi ukubheka umbukiso ezimibalabala: Tandem jumping imincintiswano acrobatics zasemoyeni.
Denver (Colorado): incazelo, ezindaweni ezithakazelisayo, izithombe
Izinto ezithakazelisayo kakhulu eKemerovo
Bangalore, India: izikhangibavakashi, ukubuyekezwa
Balaklava - kuyini? Makalale balaclava
Izikhundla ukwazi - uhlelo bengqondo
Inani umbala kwengqondo
Zokucindezeleka - Iyini? Umqondo lokucindezeleka ngokwengqondo
Ukululama kwesisu: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo. Okufanele ukwenze ngemuva kwesisu?
China othenga umoya ohlanzekile Canadian
Umuthi 'askofen'. Yokusetshenziswa
Imigomo yolimi: mini-isichazamazwi zesikole
Dzheyms ePatterson. Biography, izincwadi